गर्भावस्थाको बेला पटक्कै खान नहुने खाद्य पदार्थहरु | पहिलो बोली
गर्भावस्थाको बेला पटक्कै खान नहुने खाद्य पदार्थहरु
२०७६ माघ ५, आईतबार (२ साल अघि)
५४२५ पटक पढिएको
Published on: Sunday January 19, 2020 (2 years ago)
गर्भावस्था महिलाको जीवनको एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अवधि हो। त्यसकारण, गर्भवती महिलालाई स्वस्थ आहार खानु यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। गर्भवती आमाहरूले के खाएमा ध्यान दिएर खान ध्यान दिएर खानुपर्छ र हानिकारक खाना र पेय पदार्थहरू बाट जोगिनुपर्छ । केहि खानेकुरा मात्र हल्का खान सकिन्छ , जबकि कुनै खान पूर्ण रूपमा त्याग गर्नुपर्दछ। यहाँ ११ खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थहरू छन् जुन एकदम होसियारी पुर्वक वा पुरै त्याग गर्नुपर्छ ।
हाई मर्करी फिश
मर्करी एउटा अत्यन्तै विषाक्त तत्व हो। योसँग एक्सपोजरको कुनै सुरक्षित स्तर छैन र प्राय जसो प्रदूषित पानी मा भेटिन्छ। अधिक मात्रामा, यो तपाईंको स्नायु प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली र मिर्गौलामा विषाक्त हुन सक्छ। यसले बच्चाहरूमा गम्भीर विकास समस्याहरू पनि निम्त्याउन सक्छ । यो प्रदूषित समुद्रहरूमा फेला पर्ने हुनाले , ठूला समुद्री माछा मर्करीको उच्च मात्रा जमा गर्न सक्छन्। तसर्थ, गर्भवती महिलाहरूलाई उच्च मर्करी माछाको उपभोग प्रति डाक्टरहरु ले एकदम सतर्कता पुर्वक खान सल्लाह दिन्छन ।
टूना (विशेष गरी अल्बोर टुना)
यद्यपि यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि सबै माछा पारामा उच्च हुदैन। गर्भावस्था मा कम मर्करी माछा उपयोग धेरै स्वस्थ छ, र यी माछा प्रति हप्ता २ पटक खान सकिन्छ।ओमेगा फ्याटी एसिडमा स्वास्थ्य फ्याट हुन्छ, जुन तपाईंको बच्चाको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
गर्भवती महिलाहरूले प्रत्येक महिनामा १-२ पटक भन्दा बढि मर्करी माछा खान हुँदैन। यसले सार्क, तरवारफिस, टूना र म्याकेरल समावेश गर्दछ।
नपाकेको , कच्चा र प्रसोधन गरिएको मासु
काटिएको मासु, मासु प्याटिज, बर्गर,कांचो मासु, सुँगुर,खसी र कुखुराको मासु , कहिले पनि कच्चा वा नपाकेको खानु हुँदैन। यस किसिमको मासु प्रशोधन वा भण्डारणको क्रममा विभिन्न ब्याक्टेरियाबाट संक्रमित हुन सक्छ। गर्भवती महिलाले प्रशोधन गरिएको मासु उत्पादनहरू उपभोग गर्नु हुदैन जबसम्म तिनीहरू तातो वा न्यानोमा हुदैनन् ।कच्चा वा नपाकेको मासुमा हानिकारक ब्याक्टेरिया हुन सक्छ। सामान्य रूपमा,मासु मज्जाले पकाउनु पर्छ।
Green papaya on white background
तपाईंलाई पहिले नै थाहा हुनसक्छ होला ,गर्भावस्थामा मेवालाई बेवास्ता गर्नुपर्दछ, तर के तपाईंलाई थाहा छ यो किन हो? गर्भावस्थामा कच्चा मेवा उपभोग गर्न सुरक्षित मानिदैन । हरियो मेवामा लेटेक्सको मात्रा ज्यादा हुन्छ, जुन विशेष गरी हानिकारक हुन सक्छ ,किनकि यसले गर्भाशयको संकुचन निम्त्याउन सक्छ, जसले गर्भपात पनि निम्त्याउन सक्छ। काचो मेवामा पेप्सिन हुन्छ, जसले भ्रुणको विकासलाई असर गर्छ र शिशुमा धेरै जन्म दोषहरू निम्त्याउँछ।
हो, गर्भावस्थामा तुलसीको पातहरू उपभोगका लागि सुरक्षित हुँदैन। चिसो वा खोक्दा हामी अक्सर तुलसीको पातहरू चिया आदिमा हालेर खान्छौ। तर तुलसी पातमा मर्करी हुन्छ, जसले भ्रुणलाई हानी पुर्‍याउँछ र संकुचन सुरू गर्दछ।
एलोवेरा, जुन छालाको समस्याहरू सुधार्न प्रयोग गरिन्छ, गर्भावस्थामा वास्तवमा हानिकारक हुन सक्छ। यसले गर्भाशयलाई असर गरेर पेटमा संकुचन मात्र गर्दैन, तर शरीरमा चिनीको स्तर पनि कम गर्दछ। यस बाहेक एलोवेराले बान्ता र पखाला पनि निम्त्याउन सक्छ जसले शरीरको इलेक्ट्रोलाइट मात्रामा असंतुलन ल्याउन सक्छ।
हींग नेपाली खाना मा एक सामान्य कुरा हो। हामी यसलाई करी, मसूर र धेरै तरकारीहरूमा प्रयोग गर्दछौं। यो कुनै पनि खानाको स्वाद बढाउनको लागि परिचित छ। यद्यपि गर्भावस्थामा यसलाई उपभोग नगर्न सल्लाह दिइन्छ। हींगले शरीरको आन्तरिक ताप बढाउँछ र शरीरको तापक्रम बढाउँदछ। यो भ्रुणको लागि राम्रो हुदैन, किनकि शिशुको विकासलाइ निरन्तर विकासको लागि आदर्श शरीर तापमान आवश्यक छ। त्यसैले गर्भावस्थामा हींग खानेदेखि अलग रहनु नै उत्तम हुन्छ!
प्रसूति पछि मेथीको दाना महिलाको आहारको मुख्य अंश हो, किनकि यसले स्तनपानको लागि दुधको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दछ। तर यदि गर्भावस्थामा मेथीको दाना सेवन गरियो भने यसले आमा र भ्रूणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। मेथीको दानामा फाइटोस्ट्रोजेन हुन्छ, जो शरीरमा प्रवेश गर्दछ र मासिक धर्म चक्र सुरु गर्ने साथसाथै हार्मोनहरूलाई पनि असर गर्दछ। यसले गर्भाशयमा अकाल संकुचन निम्त्याउन सक्छ र गर्भ तुहिन सक्छ।
केही महिलाहरु कटहरको उपभोग गर्न को लागी इच्छा हुन्छ, जब डेलिभरी को निर्धारित मिति नजिक आउछ, यदि डाक्टरले यसको लागि अनुमति दिएको छ भने सावधानी पुर्वक सेवन गर्नुपर्छ यद्यपि, गर्भावस्थामा यो खानु पनि हुँदैन। कटहरमा ब्रोमेलेन एन्जाइम हुन्छ, जसले ग्रीवालाई नरम बनाउँछ र पिडालाइ उत्प्रेरित गर्न सहयोग गर्दछ। यसैले अनावश्यक संकुचन हुन सक्छ र गर्भपात हुन सक्छ।
सौंफमा फाइटोस्टोजेनहरू हुन्छन् जसले महिला इस्ट्रोजेन हार्मोनको रूपमा कार्य गर्दछ र गर्भाशय संकुचनलाई प्रेरित गर्दछ। मेथीको दाना जत्तिकै, सौंफ महिलालाई डिलिवरी पछि दिइन्छ किनकि यसले दुध उत्पादन बढाउँदछ र साथ साथै यसले गर्भाशय पनि सफा गर्दछ। सौंफ डाक्टरको परामर्श पछि गर्भावस्थामा थोरै मात्रामा सेवन गर्न सकिन्छ। यद्यपि स्वस्थ गर्भावस्थाका लागि यसबाट टाढा बस्नु उत्तम हुन्छ।
तपाईं दु: खी हुनुहुनेछ किनकि तपाईं आफूले चाहेको सबै कुरा खान सक्नुहुन्न, तर सम्झनुहोस् कि तपाईं यो आफ्नो र आफ्नो बच्चाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईंलाई केहि चिजहरु भनिएको छ जुन गर्भावस्थामा खानु हुँदैन, तर त्यहाँ अन्य धेरै खाद्य पदार्थहरू छन् जुन गर्भावस्थामा खानको लागि कुनै समस्या हुदैन र ती स्वादिष्ट पनि हुन्छन , त्यसैले ति खानाहरुबाट आनन्द लिनुहोस्! स्वस्थ रहन र तपाईंको बच्चालाई सुरक्षित राख्नमा ध्यान दिनुहोस् ताकि तपाईं स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिन सक्नुहुन्छ!